Ndeupi mutero weTobin? | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uri investor hapana mubvunzo kuti kubva zvino zvichienda mberi iwe uchafanirwa kunyatsoteerera kune iro zita iro richava rakakosha kwazvo kune kwako mashandiro mumisika yequity. Zvakanaka, mutero weTobin kana ITF rudzi rwemutero pamabasa emari iyo yakafemerwa makumi emakore apfuura neanotungamira economist weAmerica. Mukuita, haazove mashoko akanaka kune zvako zvido zvako sezvo uchizofanira kubhadhara komisheni nyowani yekushanda muzvikamu uye zvigadzirwa. Saka kuti nenzira iyi, mari yako inotapudzwa, kunyangwe iri pasi pesimba zvakanyanya zvine chekuita nezvikamu zvayo.
Parizvino iyo inonzi Tobin mutero kana ITF haisi kushanda munyika dzenzvimbo yeeuro. Asi hazvizotora nguva yakareba kuti ushandise sezvo zvingangotanga kushanda pakupera kwegore kana mugore rinotevera kuitira kuti zvikanganise kudyara kwako. Pakutanga, izvi mutero mutsva zvinoshanda kune kuenzanirana uye kubva kunezvakatengwa, kunyangwe zvichikwanisa kuwedzerwa kune zvimwe zvigadzirwa zvekuyera izvo zvisati zvanyorwa. Izvo zvikamu izvo rudzi urwu rwemutero huchafambiswa huchave kutenderera 0,10% nezve ese mashandiro aya.
Mutero weTobin ndewekuEurope pachiyero, sezvauchatoziva izvozvi mushure mekupokana kwakanyanya uko yakagadzirwa muEuropean Union. Izvi zvinoreva kuti ichave inoshanda muBelgium, Germany, Estonia, Greece uyezve muSpain chaimo. Kubva pane ino mamiriro ezvinhu, varimi, senge mune yako kesi, avo vanoda kushanda mumisika yequity vanofanirwa kugadzirira kutora mutero mutsva wezvemari (ITF). Zvekuti nenzira iyi, inogona kuwedzerwa kune zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kana kuchengetedza kwehupfumi. Semuenzaniso, makomisheni, mutero wemubhadharo kana kunyangwe iwo emabhangi emabhizimusi mari.
1 Mutero weTobin: uchaita sei?
2 Ndeapi misika ane chiyero ichi chinobata?
3 Mari idzi dzichakanganiswa here?
4 Chii chichava mubhadharo wemubhadharo?
5 Sei kudzikisira iyo nyowani mari?
6 Maitiro ekuderedza maitiro ayo
Mutero weTobin: uchaita sei?
Pane chinhu chimwe chechokwadi parizvino uye kuti parizvino mutero uyu haukanganise mashandiro auchazoita mumwedzi inotevera. Kunyangwe zvichinyatsoonekwa kuti iyi mamiriro haagare kwenguva refu, maererano nezvakafanotaurwa kubva kumatumbi eCommunity institution. Pane rimwe divi, ichaiswa zvishoma nezvishoma. Ndokunge, zvishoma nezvishoma uye kutanga nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya uye zvigadzirwa. To gare gare kuenderera nezvimwe zvigadzirwa zvemari, senge mari yekudyara, mvumo kana imwe nzira yekudyara.
Chero zvazvingaitika, inozove yehuwandu hwe0,10% uye zvisinei nemari yakaiswa mari uye izvo zvinokanganisa vese vanoita mari zvakaenzana. Nekudaro, zvakakosha kuti iwe utarise kubva ikozvino zvichienda kuti huwandu hwemutero weTobin unogara uripo ichagadziriswa uye kwete kusiyanisa sezvinoitika, semuenzaniso, mumakomisheni ayo chikamu chakanaka chezvigadzirwa zvemari zvinoshanda kwauri. Ichazopedzisira yave mari itsva yaunofanirwa kutarisira kubva zvino zvichienda uye izvo zvichadzikiswa kubva pane zvaunogona kuwana mumisika yemakambani.
Ndeapi misika ane chiyero ichi chinobata?
Iyi mwero ichashandiswa kune ese mashandiro anoitwa mu European stock misika. Asi chenjera chaizvo nekuti kwete mune ese, asi mune gumi nerimwe umo mune musika weSpanish. Mukuwedzera kune pakati pevamwe, chiGerman, chiItaly kana chiBelgium. Paunenge uchizoita kufamba kweaya maitiro munyika idzodzo, ndipo pavachanyatso kubhadharisa iwe mari iyi mune yega yega mashandiro auchazoita kubva panguva chaiyo yekuitwa kwayo. Ehe, haizove mari yakawanda, asi chero zvakadaro ichave iri mari nyowani inozogadzirwa mune dzako investments kubva panguva iyoyo zvichienda mberi.
Mukudaro, zvinokanganisa mashandiro anosimudzirwa kubva kumisika yemasheya. Asi nekufamba kwenguva, zvigadzirwa zvemari zvichawanda zvichakanganiswa nemutero uyu munyika yekudyara. Kusvika padanho rekufungidzira kuti rinosvika kune chero ripi zvaro. Kubva pane yechinyakare kusvika kune yakanyanya kuwanda. Chaizvoizvo hapana kana mumwe wavo achabvisa uyu mutero mutsva usati wagadzika pamisika yemari. Kunyangwe hazvo zvese zvese zvichave nyaya yemwedzi.
Mari idzi dzichakanganiswa here?
Imwe yezvinonetsa zvechikamu chikuru chevashambadziri vadiki nepakati iri mukuziva kana pakupedzisira mwero weTobin uchizosvikawo mari dzekudyara. Iwe haugone kukanganwa kuti ichi chigadzirwa chekudyara uko varimi vanonyanya kuchengetedza mari yavo. Zvakanaka, pakutanga hazvizove zvakadaro uye chete zvichienderana nekushanduka kweichi chiyero inogona kuendeswa kumari yekudyara. Nenzira imwecheteyo sezvimwe zvigadzirwa zvemari kuti kuchengetedza kunobatsira, sekutaura kwatakaita muchikamu chapfuura.
Chero zvazvingaitika, pane mukana wekusabhadhara mutero uyu uye kuri kuenda kumisika yezvemari uko kushanda kwayo kusingaite. Mupfungwa iyi, imwe yemhinduro kuenda kune iyo Great Britain equities. Nekuti mutero mutsva wevatengesi hauzotanga kushanda. Kune rimwe divi, kune zvekare sosi yekushandura mari kuenda kumisika kune rimwe divi reAtlantic. Iko kumira kweUnited States nekuda kwekukosha kwayo. Kunge misika irikubuda inoenderana neBRICS (Brazil, Russia, India, China neSouth Africa). Saka kuti nenzira iyi, iwe ramba uchiisa mari yako asi usingafungire uyu mutero mutero.
Chii chichava mubhadharo wemubhadharo?
Panguva chaiyo iyo inonzi yaTobin mutero inoiswa, iwe unenge uine mari nyowani mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi imarii chaizvo chaizvo? Zvakanaka, kana iwe ukafunga kuita yekutenga kana kutengesa mashandiro e10.000 euros Kubhadharwa kwese kuchave gumi mairi. Chero bedzi huwandu hwezvibereko hwakafungidzirwa neEuropean mitumbi inodzora inoitwa, ndiko kuti pa0,10%). Kunyangwe zvichifanofungidzirwa kuti yaizowedzera sezvo yako yemari mipiro yaive yakakura. Mune mamwe mazwi, mabhizimusi makuru emasheya airangwa pamusoro pekufamba kudiki. Mupfungwa iyi, vakarasikirwa zvikuru vangave varimi vakuru.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa chokwadi chekuti uyu mutero mutsva unozokukonzera rimwe dambudziko mukutarisira kwekuchengetedza kwako. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hauzozive chaiyo nguva yacho vachatora kubva pachiyero chako muakaunti yekutarisa. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuve nekumwe kuvhiringidzika pamusoro pekushandisa kwayo. Hazvishamise kuti ichi chinhu hachisi chako chete, asi kunhamba zhinji yevaponesi vasingazive zvemakanika chaiwo ekuitwa kwayo mukuita kunoitwa mumisika yemari.
Sei kudzikisira iyo nyowani mari?
Kubva pakauya chiyero chitsva ichi, hapana mubvunzo kuti iwe uchave nemari zhinji, kunyangwe mune ino kesi ichange iri yakaderera uye isinganyanye kukumbira. Nekudaro, iwe une akati wandei mazano ekuti gadzirisa zvazvinoita muhomwe yako. Imwe yeaya marongero anobva mukubviswa kweanotyisa mashandiro mumisika yemari. Iwe unofanirwa kuve unonyanya kusarudza mukusarudza kwehunhu kubva zvino zvichienda mberi sezvo zvisingadiwe kuti uve nemari yakawanda yemari yekushanda yausingazonyatsoita kuti ibatsire.
Rimwe danho raunofanirwa kuteedzera kudzikisa mwero uyu kusarudza akanakisa makomisheni pamusika. Zvekuti nenzira iyi, iwe unobhadhara iyo nyowani yekuchaja iyo yave kuda kuoneka. Ramba uchifunga kuti zvichienderana nekomisheni yakashandiswa nevamiriri vezvemari iwe unogona chengetedza iwe ingangoita 30% yemari kubva pachinzvimbo ichi mune zvigadzirwa zvemari. Ehezve, yakanyanya kukwirisa kupfuura izvo zvakaburitswa zvakagadzirwa neiyi yakasarudzika mutero. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kutogadzira yakakura hazvo midziyo yemari.
Maitiro ekuderedza maitiro ayo
Mune imwe tsinga, izvi zvakare zvinobatsira iwe kuwedzera epakati nepakati-kwenguva mashandiro pane kukurumidza mashandiro. Nekuti kuburikidza neichi chakasarudzika zano iwe unenge uine chakakosha sosi yekuchengetedza. Zvisinei nekuuya kwechiyero ichi chatiri kutaura nezvacho. Kuda iwe uchave zvishoma inosarudzika pakuita mashandiro. Ndokunge, zvichave zvirinani kusimbisa mashoma uye zvine pundutso kupfuura akawanda uye akawanda akagadzirwa. Kubva pane ino maonero, kuunzwa kwemutero weTobin kunogona kuve kwakanaka kudzivirira zvido zvako zvega.
Kune rimwe divi, zvinogara zvichikuita kugonesa dzimwe nzvimbo kana misika yezvemari iwe yawanga usati waongorora kusvikira zvino. Mupfungwa iyi, hongu, mikana yebhizinesi ichawedzera kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete nezve kune misika yemasheya, asiwo kuita chibvumirano nezvimwe zviwanikwa zvemari. Hazvishamisi kuti ivo vanoregererwa kubva pamubhadharo uyu, semuenzaniso mumisika yezvigadzirwa kana simbi dzinokosha, pakati pezvimwe zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeupi mutero weTobin?